Iflethi Iyaqashiswa eRawalpindi, ePunjab
Real Estate Listings: » Residential homes » Flats » PK » Punjab » Rawalpindi » Iflethi Iyaqashiswa eRawalpindi, ePunjab1
Usayizi waphansi: 4900.518 Sq feet
Lesi yisakhiwo esihle ongasiqasha njengamanje. Akunasidingo sokuyekethisa endleleni yokuphila enokuthula ngokuhlala kule ndawo eseBahria Town Rawalpindi. Isidingo sendawo esikhulayo eBahria Town Phase 7 senza manje isikhathi sokwenza isinyathelo sokutshala imali. Azikho izakhiwo eziningi ezinamanani entengo angama-Rs 15,000. Ngakho-ke, kungcono ukubamba isipho, ngaphambi kokuba omunye umuntu akwenze. Impahla yezinyawo ezingama-400 kufanele uyihlole. Ifulethi onalo lingalingana kahle nezidingo zakho. Eminye imininingwane evelele yendawo ingokulandelayo. Hlala uthokomele ekhaya lakho ngenxa yohlelo lokushisa oluphakathi nendawo. Insizakalo yokulahla imfucuza nsuku zonke iqinisekisa indawo ehlanzekile. Lesi sakhiwo sifaka indawo yokwamukela izivakashi eyenziwe kahle. Inkimbinkimbi iza ifakwe umoya ophakathi nendawo wokuqinisekisa isipiliyoni esihle. Ngeminye imininingwane, sishayele manje!